Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam (50-41-9) Manufacturer - Buyaas
Ny vovon-tsolam-paty Clomiphene no fomba fitsaboana betsaka indrindra ampiasaina hanatsarana ny fahavokarana amin'ny taona 40. Ny Clomiphene dia fandrosoana revolisionera amin'ny fanafody fametavetana ary lasa nalaza haingana noho ny fampidiran-drano ny ovulation noho ny fahamendrehany ny fitantanana sy ny vokatra hafa. Na izany aza, letrozole, inhibitor aromatase, dia mahomby ihany koa amin'ny fampidirana fiterahana amin'ny vehivavy miaraka amin'ny aretina polyarystika (PCOS). Ny tahirin-kevitra misy dia milaza fa ny tahan'ny zaza teraka dia ambony kokoa amin'ny letrozole noho ny clomiphene, ary manam-pahaizana maro no manome soso-kevitra ny letrozole ho fitsaboana voalohany amin'ny fitsaboana vehivavy amin'ny PCOS.
Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-borona (50-41-9) video
Rohom Clomiphene Citrate (Clomid) poopy (50-41-9) Description
Ny Clomiphene Citratrate dia ampiasaina mba hitondrana ny tsy fahampian'ny vehivavy. Izy io dia miasa amin'ny fanentanana ny fitomboan'ny hormones izay manohana ny fitomboana sy ny famoahana ny atody mature (ovulation). Tsy azo atao izany fanafody izany ho an'ny vehivavy izay tsy misy atody intsony ny ati-doha (fototra tsy ara-pahasalamana na oviana).
Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-paolo dia tsiranoka oralina, tsy steroidal, ovulatory izay miasa toy ny sela mpanome modifier (estrogen) modulator (SERM). Ny Clomifene dia afaka miteraka amin'ny ovulation maro, ka noho izany dia mampitombo ny mety hisian'ny kambana. Raha oharina amin'ny FSH, dia ambany ny tahan'ny otrikaretina hyperstimulation. Mety misy ny mety ho voan'ny homamiadan'ny oviana sy ny fahazoana mavesatra. Ny Clomifene dia afaka mifandray amin'ny taovan'ny estrogen-receptor-misy, toy ny hypothalamus, pituitary, ovare, endometrium, vagina, ary matavy. Mety hifaninana amin'ny estrogen ho an'ny tranokala estrogen-receptor-dia izy ary mety hanemorana ny famerenana ny réceptors intracellular receptors. Ny Clomifene dia manomboka andiam-pihetseham-pandrenesana miady amin'ny endocrine izay miakatra amin'ny fiakaran'ny gonadotropine sy ny taovam-pitenenana manaraka. Ny hetsika endocrine voalohany, ho setrin'ny fitsaboana clomifene, dia fitomboan'ny famoahana ny gonadotropine pitipika. Izany dia manomboka ny steroidogenesis sy folliculogenesis izay miteraka ny fitomboan'ny foliolika oviana sy ny fitomboan'ny haavo rongony estradiol. Taorian'ny fisian'ny ovulation, ny progesterone plasma sy estradiol dia mitsambikina ary latsaka toy ny ao anaty sikina ara-pahasalamana ara-dalàna.
Raozy Clomiphene Citrate (Clomid) voly (50-41-9) Specifications
Product Name Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-pototra (50-41-9)
Anarana simika Clomifene citrate; Clomid
molekiolan'ny Formula C32H36ClNO8
molekiolan'ny Wvalo 598.089 g / mol
Ny antsasaky ny biolojia 5-7days
Solubility Vitsy be loto amin'ny rano, metanol, chloroform (kely), ary DMSO (10 mM). Tsy misy ety an-tany.
Application izay natao mba hitondrany ny tsy fahampian'ny vehivavy
Clomiphene Roam Clomiphene Citrate (Clomid) poids (50-41-9)?
Ny vovon-tsakafo Clomiphene dia karazana ody fanafody. Ny mpitsabo matetika dia manoratra ity fanafody ity mba hitondrany ny tsy fahampian'ny vehivavy.
Ny tsiranoka citrate Clomiphene dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny estrogen, izay hormona ho an'ny vehivavy. Ny fampidirana an'io zava-mahadomelina io dia mampirisika ny ovulation, na ny fanafahana ny atody iray avy amin'ny ovy. Izany dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fahavokarana ho an'ny vehivavy izay manana olana amin'ny fitadiavana noho ny olana amin'ny ovulation.
Ahoana ny Rohom Clomiphene Citrate (Clomid) (50-41-9) asa
Ny Clomiphene dia manosika ny atidohitry ny ati-doha ao amin'ny atidoha mba hisorohana ny fihenan'ny fôlônika (FSH) sy ny LH (luteinizing hormone). Izany fihetsika izany dia manosika ny fitomboan'ny foliolika oviana ary dia manomboka ovulation.
Mandritra ny tsingerim-bolana mahazatra dia misy atody iray ihany no ovulai. Ny fampiasana klomifen dia matetika mahatonga ny oviana hamokatra atody roa na telo isan-tsokajy. Ny Clomiphene dia nalaina am-bava nandritra ny 5 andro ary tsy misy afa-tsy mandritra ny volana alaina.
Raozy Clomiphene Citrate (Clomid) vovoka (50-41-9) Dosage
Fandrosoana ho an'ny olon-dehibe amin'ny induction Ovulation:
50 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro nandritra ny andro 5. Ny fitsaboana dia tokony atao amina na eo akaikin'ny andro 5tan'ny vanim-potoan'ny ratra, saingy mety ho azo atao amin'ny marary tsy misy fitsangatsangana vao haingana.
Raha misy ny fitrandrahana ary tsy mahatratra ny fitondrana vohoka, hatramin'ny 2 dia mety amin'ny fomba hafa ny clomiphene 50 mg am-bava indray mandeha isan'andro amin'ny andro 5 azo omena. Ny dingana isan-karazany dia mety manomboka amin'ny 30 andro aorian'ny fianarana teo aloha ary aorian'ny fanondranana ny bevohoka.
Ny ankamaroan'ny marary dia manararaotra ny fitsaboana voalohany. Na izany aza, raha tsy mahavita manararaotra ny marary, ny fizarana faharoa amin'ny 100 mg / andro ho an'ny andro 5 dia azo omena alohan'ny andro 30 manaraka ny dingana voalohany. Ny fizarana fahatelo amin'ny 100 mg / andro ho an'ny andro 5 dia mety homena aorian'ny andro 30, raha ilaina.
Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-pototra (50-41-9) fampiasana
Clomiphene citrate / Clomid vovoka dia ampiasaina mba hitondrana ny tsy fahampian'ny vehivavy. Izy io dia miasa amin'ny fanentanana ny fitomboan'ny hormones izay manohana ny fivelarana sy ny famoahana ny atody mature (ovulation). Tsy voatery hisorohana izany fanafody izany ho an'ny vehivavy izay tsy misy atody intsony ny ati-doha (fihinanana pitipoa na oviana misotro).
Buy Clomiphene Citrate (Clomid) powder avy amin'ny Buyaas.com
1 famerenana for Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-pototra (50-41-9)
5 avy tany 5
Admin - Enga anie 6, 2019 :
Ny vokatra CLUMIPHENE CITRATE (CLOMID) POWDER dia tena ilaina.
ny Rating Rate ... Perfect tsara Average Tsy hoe ratsy Very Mahantra